Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Njide obi obi: Na-emelite ọnụego nlanarị
Na Singapore, 1 n'ime ndị ọrịa nkụchi obi 3 nwere ike ịhụ ihe omume obi ugboro ugboro. Ọ bụ ezie na nhazigharị obi bụ ntọala nke mgbochi nke abụọ, naanị 6% ruo 15% nke ndị ọrịa tozuru etozu taa na-aga mmemme mmezi obi.
Philips Foundation na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na-elekọta mmadụ Singapore Heart Foundation (SHF) taa kwupụtara mmekorita iji meziwanye nsonaazụ obi obi na obodo site n'ịbawanye inweta nlekọta ahụike dị mma. Mmemme nke were otu afọ iji kwado ụlọ ọrụ akpọrọ “SHF – Philips Foundation Heart Wellness Center” ọhụrụ bu n'obi ibelata ọnụọgụ ọnwụ nke ọrịa obi site na opekata mpe 50% (ma e jiri ya tụnyere ndị ọrịa na-anaghị eso ya) wee belata ihe egwu mmadụ nwere n'ụlọ ọgwụ. ntinyeghachi site na 25%.
SHF - Philips Foundation Heart Wellness Center, nke Philips Foundation ga-akwado mmemme nrụzigharị na arụ ọrụ ya n'afọ na-abịa, ga-edozi nsogbu a wee kwalite itinye aka dị elu na mmemme mmezigharị site n'ime ka ịbanye n'ime obi obodo.
SHF – Philips Foundation Heart Wellness Center bụ otu n'ime ụlọ ọrụ atọ SHF na-arụ nke na-enye ọrụ mmezigharị obi na-enye nnukwu nkwado. Dị na Fortune Center (190 Middle Road), SHF - Philips Foundation Heart Wellness Center dị mma maka ndị ọrịa obi na ndị nọ n'ihe ize ndụ iji nweta akụrụngwa nlekọta dị mkpa na ndị ọkachamara ahụike iji nọgide na-ahụ ike obi ha. N'ebe etiti ahụ, ndị mmadụ n'otu n'otu ga-enweta mmemme ahụike obi, usoro nhazigharị obi nke 3 na 4 ahaziri ahazi, ebe ndị ọkachamara nlekọta ahụike nke SHF ga-enye nduzi na klaasị mgbatị ahụ ahaziri, ndụmọdụ nri nri, na mmụta maka àgwà ahụike obi na-adịgide adịgide - niile. nke dị mkpa maka nsonaazụ onye ọrịa kacha mma. SHF na-akwado ihe dị ka mmadụ 2,500 na ụlọ ọrụ atọ ya, nke 675 dị na Fortune Center.
Ịkwado mmemme mmezi obi nke enwere ike ịnweta na Fortune Center dị mkpa karịsịa n'ịkwalite ohere ilekọta ndị agadi agadi, bụ ndị na-adịkarị obere mkpanaka ma na-enwekarị ike ịdaba na mberede obi abụọ. Ego nke Philips Foundation nwetara ga-enyekwara aka mee ka ụgwọ mweghachi obi dị ala maka ndị otu iji belata ụfọdụ ihe mgbochi dị ugbu a na-egbochi ohere nlekọta ma nyere ha aka ịgbaso usoro nhazigharị ha.
Mmụta na ịkụnye obi ike maka ime ihe bụkwa akụkụ dị mkpa nke mmekorita a. Lancet Public Health chọpụtara na usoro nlekọta ahụike ọha na eze na Singapore jikọtara ọnụ na-abawanye ohere nke resuscitation cardiopulmonary (CPR) site n'aka ndị na-ekiri ya n'oge ejidere obi na-anọghị n'ụlọ ọgwụ (OHCA) ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu asatọ, na ọnụ ọgụgụ nlanarị karịa okpukpu abụọ, na-egosi mkpa ọ dị. mmemme ndị dị otú ahụ iji melite nsonaazụ OHCA.
Mmekọrịta a ga-ahụkwa mpaghara 20 na Singapore nwere ndị defibrillators mpụga akpaghị aka (Philips HeartStart AEDs) na ndị mmadụ 500 zụrụ azụ na CPR + AED ihe karịrị otu afọ iji wuo obodo ndị dị njikere na ndị na-agbanwe agbanwe bụ ndị a kwadebere nke ọma iji nagide ihe omume nke obi obi.